अन्तरिक्षमा ३४० दिन बिताएका केलीको बदलियो ‘डिएनए’ | Ratopati
बिहीबार १५ जेठ, २०७७ Thursday, 28 May, 2020
अन्तरिक्षमा ३४० दिन बिताएका केलीको बदलियो ‘डिएनए’
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख ४, २०७६ chat_bubble_outline0
एजेन्सी – अन्तरिक्षमा करिब एक वर्ष विताएका नासाका अन्तरिक्षयात्री स्कान्ट केलीको डिएनए परिवर्तन भएको छ । उनले पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा ३४० दिन बिताएर तीन वर्ष पहिलो फर्किएका थिए ।
नासाका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार बिहिबार अन्तरिक्षको कक्षमा बसिरहेको सयममा केलीको शरीरमा कयौँ परिवर्तन भइरहेको थियो । उनका केहि कोशिकाहरुमा डिएनए परिवर्तन भएका छन् । उनको प्रतिरक्षा प्रणालीले नयाँ सिग्नलहरु उत्पादन गरेको छ । जसले गर्दा उनको शरीरमा नयाँ ब्याक्टेरियाहरु भेटिएका छन् । तर उक्त ब्याक्टेरियाहरुले शरीरमा कुनै नोक्सान नपुर्याएको र पृथ्वीमा फर्किएपछि घट्दै गएको छ । यद्यपि, थोरै मात्रामा स्मरण शक्तिमा गिरावट हुँदै गएकाले वैज्ञानिकहरु चिन्तित छन् ।
केहि वैज्ञानिकहरुले उक्त समस्याको समाधान भेटिने दाबी गरेका छन् । साथै, यसले अन्तरिक्षयात्रीको लागि मंगल ग्रह वा अन्तरिक्षमा लामो समय बस्नु कति सुरक्षित छ त भन्ने प्रश्न पैदा भएको छ । अव यसको जवाफ केहि समयमा नै हुन गइरहेको अन्तरिक्षसम्बन्धी थप अध्ययनले पुष्टि गर्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । अमेरिकाका स्क्रिप्स रिसर्च ट्रान्सलेशनल इन्स्टिच्युटका निर्देशक डाक्टर एरिक टोपोलले यो व्यापाक अनुमान भएको बताएका छन् ।
५५ वर्षीय केलीले अमेरिकाका नौसेनामा क्याप्टेन भएर काम गरिसकेका छन् । उनी र उनका भाइ मार्क १९९५ मा नासामा जोडिएर अन्तरिक्ष यात्री बनेका थिए । अन्तरिक्षमा बसोबास गर्न योग्य छ कि छैन भनेर परिक्षणको लागि सन् २०१५ मार्च २७ मा केलीलाई अर्का एक सहयोगीका साथमा अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो । अन्तरिक्षमा ३४० दिन बसेर उनी १ मार्च २०१६ मा पृथ्वीमा फर्किएका थिए । त्यसपछि सन् २०१६ को मार्च १२ मा उनले नासाबाट हट्ने निर्णय गरे ।
मान्छेले मात्रै हैन, अन्य प्राणीहरुले पनि पालना गर्छन् सामाजिक दुरी !
‘सफा’ साबुनको ‘फोहोर’ इतिहास
मचिस पहिले आविष्कार भएको थियो कि लाइटर ?
ढिलो चार्ज हुन्छ स्मार्टफोन ? अपनाउनुस् यी पाँच तरिका
चराले गन्ध थाहा पाउँछ कि पाउँदैन ?
मलेरिया रोगको रोकथाममा नयाँ आशा : सूक्ष्मजीवले रोग ‘पूर्ण रुपमा रोकिने’
पतिको हत्या गरेको अभियोगमा महिला पक्राउ
के दक्षिण कोरियामा महामारी फिर्ता भएको हो ?
प्रदेश नं २ मा सङ्क्रमितको संख्या ४०० पुग्यो
सिरहामा थप ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
स्वाभिमानी नेपालीलाई मिचाहा प्रवृत्ति सह्य हुँदैन : डा. मीनेन्द्र रिजाल
रौतहटमा कोरोना संक्रमितको संख्या ११० पुग्यो
राप्रपा स्थापनाको ३० वर्ष पूरा, यसरी स्थापना भएको थियो पार्टी
रणवीरसँग ‘ब्रेकअप’ को बारेमा कैटरीनाको यस्तो खुलासा
काँग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक
रौतहटका ५ सय परिवारलाई ग्यास र चुुल्हो वितरण